“မိခင်တယောက်အတွက် လောကမှာအရေးကြီးဆုံးက သူမရဲ့ရင်သွေးပဲဖြစ်တယ်… “
အိပ်မောကျနေတဲ့ သမီးလေးနဖူးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းပြီး အိပ်ရာနံဘေးစားပွဲပေါ်က အသင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Notebookကို သက်ပြင်းချရင်းကြည့်မိတယ်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း သူက on lineပေါ်မှာ ကိုယ့်ကို အသင့်စောင့်လို့ ။ နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်လုမတတ် ကိုက်ထားမိတယ်။
“စောင့်လိုက်ရတာ ကလေးရယ်” တဲ့။ ချွှဲပျစ်ပျစ် စေးထန်းထန်း အပြောက ရင်ထဲကို ခါးသက်စွာ စီးဆင်းသွာတယ်။
“ဟုတ်တယ်… ခုမှကျောင်းကပြန်ရောက်တာကိုကြီးရဲ့”။ ၁၈နှစ်သမီးအရွယ် ခပ်သွက်သွက်လေသံလေးပေါ့။ ဒါမှ profile ပုံမှာ နှုတ်ခမ်းလေးစူတူတူ လုပ်ပြနေတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးနဲ့တူတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးနဲ့လိုက်ဖက်မှာလေ။
“ကလေး… ကိုယ့်ကို ထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ တော့ကွာ… တွေ့ ချင်တယ်” ဆိုပဲ။ တွေ့ ချင်တဲ့သူကို အချိန်တန်တော့ တွေ့ ရမှာပေါ့လေ။
“ကိုကြီး… ဒီနေ့ ညစာဘာနဲ့ စား”… သူ့ မေးခွန်းကို တမင်ကို မဖြေပဲ လှလှလေးရှောင်လိုက်တယ်။
“ကလေးကလဲကွာ… အဲလိုစကားမလွှဲနဲ့ … ကလေးလောက် ကိုယ့်စိတ်ကိုလှမ်းဖတ်နိုင်တာ ကလေးပဲရှိတယ်… မှန်းကြည့်… ဒီနေ့ ညစာကိုယ်ဘာနဲ့ စားလဲ”….။ စိတ်ကို လှမ်းဖတ်နိုင်သတဲ့လား။ အကျယ်ကြီးသာ အော်ရယ်ပစ်ချင်တော့တယ်။
“အင်း….. မဟုတ်မှလွဲရော ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ ပဲကုလားဟင်း…ဟိဟိ”။ ရင်တွေခုန်လိုက်စမ်း ကိုကြီးဆိုတဲ့သူရေ။
“ဘာလို့ များအဲလောက် စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေတာလဲ ကလေးရယ်” ဆိုပါလား။ ဘာလို့ ဒီလောက် စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတာသိခဲ့ရင် ရှင်ဘယ်လိုနေမလဲ။
“ကိုကြီး… girl friendမမ နဲ့ OKလား” … သေချာအောင် သွေးတိုးစမ်းလိုက်တယ်။
“သူနဲ့ ပြတ်တာ တလတောင်ရှိပါပြီလို့ကလေးကိုပြောထားတယ်လေ… ကလေးကို ယုံအောင် အပြင်မှာတွေ့ ပြီး ပြောပြချင်တယ်… သူနဲ့ က သိပ်serious မဖြစ်တဲ့ Just for fun ပါ… ကိုယ့်ရင်ကို ကလေးလောက် ဘယ်သူမှ မထိရှနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေကို ခပ်မြန်မြန်တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေ အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်သွားတော့ နဲနဲတော့ ကျေနပ်သွားမိတယ်။ တော်ပြီလေ။ ဒီနေ့ ညဒီလောက်ဆို။
“ကိုကြီး… မနက်ဖြန်projectအတွက် စာလုပ်ရဦးမှာ… ဘိုင်”…။ ခပ်သွက်သွက်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ တနေ့ လုံး အလုပ်ကပင်ပန်း… သမီးလေးစာပြတာပင်ပန်း… ချက်ရပြုတ်ရပင်ပန်း… နဲ့အိပ်ခါနီးမှာ ဒီစိတ်ပျက်စရာအလုပ်တခုကို ၀တ္တရားအရလုပ်နေရတာ ကြာတော့ လူလဲအတော် ပင်ပန်းနွမ်းရိနေပြီလေ။
“ကလေး... အဲလိုမရက်စက်နဲ့ ကွာ…တွေ့ ဖို့ ရက်လေးတော့ ပြောထားခဲ့” တဲ့။ တွေ့ ဖို့ ရက်။ ကိုယ်လဲ အဲဒီရက်ကို ရောက်ချင်နေခဲ့တာအမှန်ပဲ။ အချိန်လဲ သိပ်မဆွဲချင်ဘူးလေ။
“ကိုကြီး… နောက်အပတ်တွေ့ မယ်နော်… စက်တင်ဘာ၉ရက်လေ”…။ အဲဒီနေ့ ကို ကိုယ်တမင်တကာ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းကို သူရိပ်မိပါ့မလား။ မွှန်နေတဲ့သူက ရိပ်မိပုံမရ။
“ပျော်လိုက်တာကလေးရယ်… ဘယ်မှာတွေ့ ကြမလဲဟင်” ဆိုကတည်းက ကိုယ်သိလိုက်ပြီ။ အဲဒီနေ့ ကို သူသတိကို မရတော့တာဆိုတာ။ ပါးပြင်ပေါ်က စိုစွတ်လာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ရင်း…နောက်ဆုံးတခွန်းနဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
“မနက်ဖြန်မှပြောမယ်… ဘိုင်”။ လူးလွန့် လာတဲ့သမီးလေးကို ဆံပင်လေးတွေ ဖွဖွသတ်ပေးနေမိတယ်။ သမီးရေ မေမေ့အတွက် လောကကြီးမှာ အရေးကြီးဆုံးက သမီးပါပဲ။ သမီးအတွက် မေမေမလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်တွေ လုပ်နေရတော့တယ်။
“စိတ်ခံစားမှုနောက်ကို မျက်ကန်းတယောက်လို လိုက်ရင်း ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်နိုင်တဲ့ အမှောင်တိုက်ထဲကို အဆင်အခြင်ကင်းမဲ့စွာ တိုးမိတဲ့ကျွန်မအတွက် ၀ဋ်ဆိုတဲ့အရာက အဲလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့တာ အမှန်ပဲ နှင်းရယ်”
ဆိုင်ထဲကို လှမ်းဝင်လာတဲ့ ဆံပင်တိုတို မျက်နှာထင်းထင်းနဲ့အခြယ်အသကင်းပြီး ပင်ကိုယ်လှနေတဲ့ သူဟာ နှင်းဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မျက်ဝန်းတောင် ကိုယ်မယုံမိ။ ရှပ်အင်္ကျီအပြာရောင်လေးနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီလေးဝတ်ခဲ့မယ်လို့ နှင်းပြောထားသည်လေ။ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ နူးညံ့နေတဲ့ နှင်းက ကိုယ့်ကို လှမ်းမြင်ပြီး ပြုံးပြသေးတာ။ တကယ်ဆို ကိုယ်က ဒီအပြုံးတွေနဲ့ မထိုက်တန်တာပဲ။
“စောင့်ရတာကြာသွားသလား မနေနေ… ဆောရီးနော်… ကျွန်မသမီးလေးကျူရှင်ပို့ ပြီးမှ လာရတာမို့ ပါ”
“ရပါတယ်နှင်းရယ်… နှင်းမှာ သမီးလေးကိစ္စတွေ တယောက်ထဲလုပ်နေရတယ်ဆိုတာ တို့ နားလည်ပါတယ်”
ယဉ်ကျေးတဲ့နှင်းကို နူးညံ့စွာတုန့် ပြန်မိတယ်။ ငွေမက်…ဂုဏ်မက်.. ပကာသနမက်.. မောက်မာတဲ့မိန်းမ… တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့မိန်းမတဲ့။ အဲဒီအပြောတွေကို ကိုယ်က အသေအချာကြီးကို ယုံပစ်ခဲ့ပြီး ဒီမိန်းမလက်ထဲက အချစ်ကို ကယ်တင်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့သေးတာ ပြန်သတိရပြီး တယောက်ထဲရှက်နေမိတယ်။ နှင်းကတော့ ဘယ်သိနိုင်မလဲနော်။
“ပြောပါမနေနေ… ဘာများအရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့ လဲဟင်”
နှင်းကတည်ငြိမ်သလောက် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူလို့ ။ နှင်းကို ခုချက်ချင်းကွာရှင်းခဲ့… နှစ်ယောက်အတူဘ၀လေး တည်ထောင်ကြမယ်လို့ … ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်အောင် နိမ့်ကျလွန်းတဲ့ ကိုယ့်ကို နှင်းတကူးတက လာတွေ့ ပေးတာ ကျေးဇူးပါနှင်းရယ်။
“ဘာမှတော့ အရေးတကြီး မရှိပါဘူးနှင်းရယ်…. နှင်းခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ လဲ မတောင်းဆိုပါဘူး… သူများမိသားစုကို ဖြိုခွင်းဖို့ မိုက်မိုက်မဲမဲကြံစည်ခဲ့ဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်က နှင်းဆီမှာ ဖြောင့်ချက်ပေးတယ်လို့ ပဲ သဘောထားပါနော်”
“ရပါတယ် မနေနေ… လောကကြီးဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လို့ ရတာမှာ မဟုတ်ပဲလေ… ဘယ်မိသားစုမှ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲတာကို လိုချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး… ဖြစ်ပြီးတာတွေ ထားပါတော့လေ… ခုလို မနေနေ ကျွန်မနဲ့ သမီးလေးအပေါ် မိန်းမချင်းကိုယ်ချင်းစာပေးတာ ကျေးဇူးပါ”
နှင်းနောက်ဆုံးစကားက နှလုံးသားကို ဓားချွန်ချွန်နဲ့ ထိုးနှက်လိုက်သလို။ နှင်းထင်သလို ကိုယ်က အလိုလိုနောင်တရ နောက်ဆုတ်ခဲ့သူမှ မဟုတ်တာ။ သူများနှလုံးသားထဲက မတရားလုယူခဲ့တဲ့ အရာတခုကို ပိုင်ရှင်မမှန်တော့ ကိုယ့်လက်ထဲက နောက်တယောက်လုယူခံခဲ့ရတာပါနှင်း။
“မဟုတ်ပါဘူးနှင်းရယ်… ကျွန်မအဲလောက် ဆင်ခြင်နောင်တမရှိခဲ့ပါဘူး… ခုကျွန်မအမြင်မှန်ရ နောင်တရခဲ့တာ နှင်းတို့ ကိုကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး… ခု အချစ်… ဆောရီး…နှင်းရယ်…အကျင့်ပါနေလို့ ပါ… အချစ်ဆိုတာ နှင်းရဲ့မောင်ကို ကိုယ်ခေါ်တာပါ… သူ နောက်တယောက်နဲ့ ဖြစ်သွားမှ ကျွန်မအသေအလဲခံစားရတာပါ… အဲဒီတော့မှ အိမ်ထောင်သက်တွေ အရမ်းကြာပြီး သမီးလေးတယောက်နဲ့ မိသားစုလေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နှင်း ဘယ်လောက်များခံစားရမလဲဆိုတာ သတိရ ကိုယ်ချင်းစာသွားပြီး နှင်းရှေ့ မှာ ၀န်ချချင်လို့ ပါ”
စကားအရှည်ကြီးပြောပြီး ရင်ထဲမှာ မောဟိုက်နွမ်းရိသွားတယ်။ နှင်းက မျက်ရည်တွေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ခပ်ငြိမ်ငြိမ်လေးကြည့်နေတယ်။
“ခု သူနောက်တယောက်ရသွားတာ နှင်းဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူးလားဟင်… နှင်းကြည့်တာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲနော်”ံ
ကလေး…ကလေးနဲ့ နှုတ်ဖျားက မချပဲ ကိုယ်နဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ တဲ့ နေ့ မှာ ကိုယ့်ကို ရက်ရက်စက်စက်ပြောရက်ခဲ့သူ။ သူ့ ဘ၀ရဲ့ ကျန်တဲ့နေ့ ရက်တွေကို ကလေးနဲ့ ကုန်ဆုံးတော့မှာမို့ မေ့လိုက်ပါတော့တဲ့။ အဲဒီနေ့ ကနေ ယနေ့ ထက်ထိ ကိုယ့်မှာ မျက်ရည်ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးခတ်နေရသလို နေ့ လဲမျက်ရည်… ညလဲမျက်ရည်။ နှင်းကတော့ မပူမလောင် တည်ငြိမ်လွန်းလိုက်တာ။
“စိတ်လျော့လိုက်ပါ မနေနေ…. ကိုယ့်ကိုမှ မချစ်တဲ့သူတယောက် သစ္စာမရှိတဲ့သူတယောက်ကို နာကျည်းပစ်လိုက်ဖို့ … မုန်းမေးပစ်လိုက်ဖို့ …လမ်းခွဲပစ်လိုက်ဖို့ ဆိုတဲ့ ကျွန်မမှာ မရှိတဲ့အင်အားတွေ မနေနေမှာ ရှိပါတယ်.. ကျွန်မမှာတော့ ကိုယ့်မာန ကိုယ့်အတ္တတွေထက် အရေးကြီးတဲ့ သမီးလေးက ရှိနေတယ်လေ… သမီးလေးကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုလေးရစေချင်တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့စေတနာဟာ တခြားအရာတွေကို တမင်မေ့ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပေ့ါလေ… ကျွန်မကိုခွင့်ပြုပါဦးနော်… ချက်ရပြုတ်ရဦးမှာမိုလို့ ပါ… ”
မျက်ရည်တွေကြားထဲကနေ နှင်းကို ခေါင်းငြိမ့်ပြုံးပြမိတယ်။ တကယ်လို့ သာ သူ နောက်တယောက် မတွေ့ ခဲ့ရင် ရူးရူးမိုက်မိုက်ရှေ့ တိုးပြီး သူများမိသားစုလေးကို ဖြိုခွဲဖို့ ကြံခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်လို့ မရအောင်မုန်းနေမိတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀တသက်စာဖူလုံတဲ့သင်ခန်းစာပါနှင်းရေ….။
“ဖခင်တယောက်ဆိုတာ မေ့လျော့တဲ့အထိ ယိုင်နဲ့ ပျော့ပြောင်းလွန်းတဲ့ မခိုင်မာလွန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို အမှောင်ထုထဲကနေ လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဆွဲထုတ်အလင်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဇနီးလေးနှင်းကို ကိုယ်အမြဲသစ္စာရှိနေတော့မယ်လို့လေးနက်တဲ့ကတိပေးပါတယ်နှင်းရယ်”
ဒီ shopping centre က ကလေးတွေ ပစ္စည်းဆိုင်လေးတွေ… ကလေးကစားစရာဆိုင်လေးတွေ… ကလေးကစားကွင်းလေးတွေပြည့်နေတာမို့ကလေးshopping centreလို့ ခေါ်လို့ တောင်ရတဲ့နေရာမှာ ကလေးက ချိန်းတာမို့ ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ ကလေးကို မှန်းဆကြည့်ရင်း ကိုယ့်ရင်တွေ တဒုန်းဒုန်းခုန်နေမိတယ်။ ဆံပင်ညိုညိုလေးတွေ ဆိုးထားတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ကလေးလေး ဘယ်နေရာကများ ကိုကြီးလို့ ခုန်ပေါက်ခေါ်ပြီး ပြေးလာမလားရယ်လို့အသက် ၁၈နှစ်ကောင်မလေးတွေတွေ့ တိုင်း ကြည့်ရတာအမော။
“ကိုကြီးလား… ကလေး အောက်က MCdonaldဆိုင်မှာ စောင့်နေပြီ… ဘယ်ရောက်နေတာလဲ… လာခဲ့တော့လေ…ကိုကြီးကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ double cheese burger မှာထားတယ်… လာခဲ့တော့”
“ဟုတ်ပြီ…ဟုတ်ပြီ… ကလေးရေ..ကိုကြီး double cheese ကြိုက်တာလဲ သိလိုက်တာပဲနော်… ကိုယ်ခုလာပြီကွာ”
ကိုယ်က အပေါ်ထပ်မှာရောက်နေတာမို့အောက်ထပ်က MCdonald ဆိုင်ကို အပြေးသွားမိတယ်။ ဇာအင်္ကျီဖြူဖြူလေးနဲ့ စကပ်ပန်းရောင်လေးဝတ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကြောင့် အဖြူရောင်နဲ့ပန်းရောင်အရိပ်ကလေးကို ရှာမိတယ်။ အရေးထဲ မွေးနေ့ တခုက ဆိုင်ထဲမှာ ကျင်းပနေတာမို့ကလေးတွေနဲ့ ဆိုင်တခုလုံးပြည့်နေတယ်။ ဘယ်မှာလဲကလေးရေ။
“ဖေဖေ… ဖေဖေမီးမီးမွေးနေ့ ကို လာတယ်နော်.. ဖေဖေမီးမီးမွေးနေ့ ကို မှတ်မိတယ်နော်… မေမေပြောတာမှန်တယ်”
လူအုပ်ထဲကနေ အပြေးထွက်လာတဲ့သမီးကို တွေ့ လိုက်ရတော့မှ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ၉ရက်နေ့ … သမီးမွေးနေ့ ဆိုတာ လှစ်ကနဲသတိရသွားမိတယ်။ သမီးနောက်က ကပ်လိုက်လာတဲ့ ဇာအင်္ကျီအဖြူရောင်လေးနဲ့ စကပ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ အရိပ်တခု။ ကိုယ်အပြေးအလွှားရှာနေတဲ့ ကလေးတော့မဟုတ်။ သမီးရဲ့မေမေနှင်း။ နှင်းက ကိုယ့်ကို သူ့ ဟန်အတိုင်း အေးအေးလေးပြုံးပြတယ်။
“မောင်… လာလေ… နှင်းတို့ birthday cakeမခွဲသေးပဲ မောင့်ကို စောင့်နေကြတာ… ခုနမောင့်ကို ဖုန်းဆက်တဲ့အတိုင်း ဒီမှာ နှင်းမှာထားတဲ့ double cheese burger… အရင်စားလိုက်ဦးနော်”
နှင်းပေးတဲ့ burgerကိုလှမ်းယူရင်း တစုံတခုကို အသေအချာစွာ သဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။ ကိုယ့်ဘာကြိုက်သလဲ ကိုယ်ဘာစားသလဲ ကိုယ်ဘာဝတ်သလဲ အမြဲမှန်အောင် ပြောနိုင်တာကို စိတ်ချင်းဆက်တယ်ဆိုပြီး ရင်တွေခုန်နေမိတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် ကြိတ်ရှက်မိတယ်။ ဒါဆို နှင်းက ကလေး… ကလေးကနှင်းပေါ့။
“မောင်… ဒါကသမီးအရမ်းကြိုက်တဲ့ ကိုရီးယားအဆိုတော်မလေးတွေ အခွေလေ…နှင်းမွေးနေ့ လက်ဆောင်ပေးလို့ သမီးကပျော်နေတာ… သမီးအကြိုက်ဆုံးက အဲဒီဆံပင်ညိုညိုမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးပေါ့”
နှင်းလှမ်းပေးတဲ့ အခွေကာဗာက ကောင်မလေး။ ကလေးရဲ့facebook profileက ပုံလေးပါပဲ။ နှင်းကို မလုံမလဲနဲ့ လှမ်းအကြည့်မှာ နှင်းက သမီးမွေးနေ့ ကိတ်လေးပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ထွန်းညှိနေလို့ ။ နှင်းချက်တဲ့ ထမင်းဟင်းစား… နှင်းလျှော်ဖွတ်မီးပူတိုက်တဲ့အကျီင်္ကိုဝတ်… နှင်းရှင်းထားတဲ့အိမ်သန့် သန့် မှာနေပြီး… ငြီးငွေ့ တယ် အလုပ်ရှုပ်တယ် အကြောင်းပြပြီး အခန်းခွဲနေလို့ရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကို နှင်းက သင်ခန်းစာပါးပါးလေးပေးခဲ့ပြီ။ နှင်းအပြစ်မဆိုပါပဲ ကိုယ့်မှာ ရှက်စိတ်ယူကျုံးမရတဲ့စိတ်နဲ့ ဟိုးမြေကြီးထဲကို နစ်ဝင်ပုန်းခိုနေချင်မိနေတယ်။ စက်တင်ဘာ၉ရက်နေ့ ကို တမင်တကာကို ချိန်းခဲ့တဲ့ကလေး သို့ မဟုတ် နှင်း။ သမီးလေးလဲပျော်ရွှင် ကိုယ့်ကိုလဲပညာပေး… အဲလောက်လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ မိန်းမတယောက်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ဥပေက္ခာပြုထားမိခဲ့တာ။
“မောင်… ဒီဘက်ကိုလာလေ… family ပုံလေးရိုက်ရအောင်”
“ဖေဖေ… သမီးbrithday cake လေးကို ၀ယ်ပေးတာthank you နော်”
သမီးလေးစကားကြားတော့ ကိုယ်ကြောင်သွားတယ်။ နှင်းက မျက်စိတဘက်မှိတ်ပြမှ သမီးလေးကို ကိုယ့်ကိုလဲ အချစ်မပျက်ရအောင် နှင်းကကိုယ့်အစားတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာ သတိထားမိတော့တယ်။
စကားမဆုံးခင်နှင်းက ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကို အသာပိတ်လိုက်တယ်။ အားလုံးအတူဆိုတဲ့ birthday သီချင်းနဲ့ အတူ ကိုယ်ပါဆိုရင်း ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ တသားထဲအတူပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ အရာရာအတွက် ကျေးဇူးပါနှင်းရယ်။
Posted by တန်ခူး at 10:25 PM
ခံစားဖူးလို့ အဲ့လိုလိမ်ညာတတ်တဲ့သူတွေ၊ လူရှေ့သူရှေ့မှာ သိက္ခာတခွဲသားနဲ့နေပေမယ့် လူ့နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ စောင့်ထိန်းရစကောင်းမှန်း မသိတဲ့လူတွေအတွက် သိပ်ကို လှတဲ့အကွက်ပဲ...
ကံမကောင်းတဲ့ သူတွေလဲ ရှိနေကြဆဲပဲနော်...
ကလေးတိုင်း ပျော်ရွှင်ပီးပြည့်စုံသော မိသားစုဘဝများကို
ညီမလေးမေဓာဝီကေ့ာ်မန့် လေ့း တွေ့ တော့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ publish လုပ်လိုက်တာ iPad ထုံးစံလက်ချော်ပြီး delete နှိပ်မိသွားလို့အီးမေးလ်ထဲက ကော်မန့် အတိုင်း ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မေရေ. ဆောရီးနော်.
မြတ်နိုးပြောသလိုပဲ ... ကံမကောင်းသူတွေလဲ ရှိနေကြမှာပဲ နော် အမတန်ခူး ... ။
အဲဒီလို အဖြစ်တွေ ဘယ်လောက် များနေမလဲမသိဘူး အမရယ် ... ။